Maamulka Muqdisho oo la dagaallamaya kuwa askarta isu ekaysiisa - Sabahionline.com
Maamulka Muqdisho oo la dagaallamaya kuwa askarta isu ekaysiisa Maajo 14, 2012
Sarkaal sare oo ka mid ah maamulka gobolka Banaadir ayaa Axaddii (13-ka May) sheegay in ay dawladdu la dagaallami doonto dembiilayaaasha u lebbista sida ciidanka dawladda Soomaaliya, SONNA ayaa werisay. Qodobbo la xiriira
Xukuumadda Soomaaliya oo ka xun geerida dadkii rayidka ahaa ee howlgalkii fashilmay ee Faransiiska
Ciidamada ammaanka ayaa la dagaallami doona dembiilayaasha u lebbista sida ciidanka oo markaa dila oo dhaca muwaaddiniinta Muqdisho, ayuu yiri Ku-xigeenka Guddoomiyaha Banaadir, Warsame Maxamed Xasan oo la hadlayey warfidiyeennada. Wuxuu ciidamada qaranka Soomaaliya ku ammaanay sida ay u hagaajiyeen nabdoonaanta caasimadda. War kale ayaa sheegaya in Wasiirka Gaashaandhigga, Xuseen Carab Ciise uu Raadiyow Muqdisho u sheegay in ciidamadii amniga ee ku soo tababbartay Ugaandha ay toddobaadyada soo socda ku soo laaban doonaan Muqdisho si ay uga qayb-qaataan hawlgallada nabadgelyo ee soconaya ee ka dhanka ah al-Shabaab. Muxuu kula yahay qoraalkan?